Courage Archives — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
साहस साहस साहस साहस साहस साहस साहस साहस साहस साहस साहस साहस साहस साहस
जब तपाईं एक कठिन समय मार्फत जाँदै हुनुहुन्छ, मान्छे सधैं के भन्न थाहा छैन. परिणाम अर्थहीन clichés वा तपाईं मज्जा गर्न trite प्रयासहरू छ. म सधैं cliché संग एक समस्या तिनीहरूलाई यसो भन्दै व्यक्ति गर्न कुनै अर्थ छैन कि छैन र वास्तवमा तिनीहरूलाई सुनेपछि व्यक्ति मदत छैन प्रकारको phrases- थियो गर्नुभएको. जस्तै मुर्ख कुरा, "अप्सरा Name अप" र "यो राम्रो पाउनुहुन्छ।" साँच्चै? तिमीलाई कसरी थाँहा छ? तपाईंले तिनीहरूलाई प्रकाश दिएर आफ्नो मित्र कुनै पनि पक्ष के छैन, कुनै पनि निहित छैन भनेर फ्लफी आशा. गहिरो पीडा हिट हामी रक आवश्यक जब ठोस सत्य हामीलाई धान्न.
क्यान्सर संग आफ्नो पल्ट समयमा, क्रिस्टोफर Hitchens हामी वरिपरि फेंक को अर्थहीन वाक्यांश केही समान निराशाले voiced. उहाँले आफ्नो पुस्तकमा तिनीहरूलाई एक आक्रमण केही पृष्ठहरू बिताउनुहुन्छ, मृत्यु दर. उस्ले भन्यो, "खासमा, म अलिकति कि घोषणा issuing छोडेका छन् 'जे मार्न छैन मलाई मलाई बलियो बनाउँछ।' "उहाँले यसो भन्नुहुन्छ, "को brute शारीरिक संसारमा ... भनेर मार्न सक्थे सबै धेरै कुराहरू छन्, तपाईं मार्न छैन, र त तपाईं एकदम कमजोर छोड्नुहोस्। "तपाईं बस आनन्द महसुस गर्न सकिँदैन?
यो depressing सुनिन्छ, तर मलाई लाग्छ Hitchens एक अर्थमा सही छ. It is quite possible that we can…